Home Somali News Somaliland: Xisbiga WADDANI Oo Biyo Gaadhsiiyay Dadka Ku Haraaddan Duleedka Hargaysa
Xisbiga Mucaaradka ah ee Waddani, ayaa shalay 2500 oo foostooyin biyo ah gaadhsiiyey dadka danyarta ah ee ku dhaqan duleedka bari ee magaalada Hargeysa oo muddooyinkii danbe ay haysay biyo la’aan aad u xooggani.
Haldoor Barkhad Jaamac Xirsi (Batuun), oo ugu horayn halkaas ka hadlay, ayaa faah faahin ka bixiyay biyahan ay ugu dadka danyarta ah, waxaana uu uu sheegay in aanay mucaaradnimadu kaliya ahayn in wax la dhaliilo balse ay sida oo kale mudan tahay in la barbar istaago dadka tabbaalaysan ee u baahan in la caawiyo.
“Waxaanu maanta biyo u qaybinay xaafadaha danyarta ah ee duleedka Bariga Hargeysa, runtii mucaaradnimadu dhaliil uun maaha ee waa u dambqashada dadka tabaalaysan oo maalinta ay jilicsan yihiin la garab istaago, laguna taakuleeyo waxii la helaayo, annaguna maanta waxaanu intii karaankayaga ahayd aanu biyo ugu dhaaminaynaa dadka oo dad maati u badan oo danyar ah. Xukuumadduna runtii waa ay dayacday xaafaddan iyo dhammaanba xaafadaha kale ee danyarta ah iyada oo hantidoodii iyo maalkoodiiba haysa. Ka xisbi ahaan biyo dhaamintaasi waa mid aanu Illaahay dartii u galnay, Illaahay ayaanu ajar kaga doonaynaa, ummada Somaliland ee ganacsatada ah iyo qurba-joogtaba, waxaanu ka codsanaynaa oo aanu leenahay xukuumad dalkii iyo dadkii lagu haleeyaa ma jirto e’ ha loo soo gurmado ummada.”.Ayuu yidhi Barkhad Jaamac Xirsi.